टेनिसमा प्रशंसालाई तेस्रो रजत पदक- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
टेनिसमा प्रशंसालाई तेस्रो रजत पदक
काठमाडौँ — नेपाली टेनिस खेलाडी प्रशंसा मोक्तानले प्रथम कतार एसियाली जुनियर यू–१४ टेनिस प्रतियोगिताको सर्किट–२ मा रजत पदक जितेकी छन् । उनले सिंगल स्पर्धामा पदक जितेकी हुन् ।
दोहास्थित खलिफा इन्टरनेसनल टेनिस एन्ड स्क्वास कम्प्लेक्समा सम्पन्न फाइनलमा प्रशंसा रुसकी एलेक्जेन्ड्रासँग ६–२, ६–३ को सोझो सेटमा पराजित भएकी थिइन् । सर्किट–१ मा पनि प्रशंसा एलेक्जेन्ड्रासँगै २–० को सेटमा पराजित हुँदै रजतमै चित्त बुझाउनुपरेको थियो । सर्किट–१ मा प्रशंसाले गर्ल्स डबल्समा पनि रजत जितेकी थिइन् । सर्किट–२ को डबल्समा भने उनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिइन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ २१:०२
संसार हेर्ने धोको [फोटोफिचर]
जेष्ठ १०, २०७९ शब्द/तस्बिर : आश गुरुङ
मनाङ — हिमाली जिल्ला मनाङमा मंगलबारदेखि २ दिने आँखा शिविर सुरु भएको छ । सदरमुकाम चामेस्थित सामुदायिक आँखा केन्द्रमा संचालित शिविर बुधबारसम्म चल्नेछ । तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतको नेतृत्वमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान काठमाडौंका १५ जना स्वास्थ्यकर्मी शिविरमा खटिएका छन् ।
डा. रुइतले मंगलबार ६२ जना वृद्धवृद्धाका आँखाको शल्यक्रिया गरेका छन् । आँखा शिविरमा कहिल्यै आँखाको परीक्षण नगरेका विरामीहरु समेत उक्त शिविरमा आएको बताएका छन् । आँखा शिविरमा २ दिन हिँडेर दुर्गम नार्पाभूमिको नारगाउँदेखि समेत विरामी आएका छन् । सदरमुकाम चामे, तल्लो मनाङको नासों र माथिल्लो मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाबाट आएका आँखाका विरामीले सेवा लिएका छन् । तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान, तेज कोहली एण्ड रुइत फाउन्डेशन र सामुदायिक आँखा केन्द्र मनाङको आयोजनामा संचालित शिविरमा करीब ८ सयजनाको आँखा परीक्षण गरिएको छ ।
परीक्षणपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने आँखाका विरामीको आँखा शल्यक्रिया गरिएको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका बाह्य कार्यक्रम अधिकृत नामखेन लामाले बताए । उनका अनुसार शल्यक्रियाका लागि लमजुङ र गोरखाबाट समेत विरामी आएका छन् । चामेमा यस्तोखाले आँखा शिविर पहिलोपटक आयोजना भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ २०:५०